Ciidamo Itoobiyaan Ah Oo Lagu Laayay Duleedka Degmada Ceelbuur Ee Gobolka Galguduud.
Wednesday January 21, 2015 - 20:21:14 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo ciidamada xabashida Itoobiya iyo mujaahidiinta ku dhaxmaray deegaanno katirsan gobolka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya Galguduud ayaa sheegaya in kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo maanta barqadii ka amba-baxay magaalada Ceelbuur uu dagaal culus ku qabsaday deegaanka Ceel-qoolle oo qiyaastii 20 KM ujira degmada Ceelbuur.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay ciidanka gumeysiga Itoobiya ka gubeen gaari Nuuca dagaalka ah,dhimashada Itoobiyaanka ayaa lagu sheegay 5 askari halka 10 kale dhaawacyo soo gaareen.
Ujeedka ciidanka Itoobiya ayaa ahaa in sahay ay kasoo gelbiyaan dhanka degmada Dhuusamareeb oo ku dhawaad 100KM ujirta magaalada Ceelbuur.
wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidanka Itoobiya oo dhimasho iyo dhaawac ku sita gaadiidkooda uu gabalku ugi dhacay inta u dhaxaysa tuulooyinka Maalin-nugur iyo Ceel-lahelay halkaasi oo ay ku hor fadhiyaan ciidamada shabaabul Mujaahidiin.